UGiuseppe Verdi wayeyinkanyezi ekhanyayo yase-Italy. Ngaphandle kokuba ngumntu ohamba phambili womculo, wayengumntu wezopolitiko obonakaliswa ngamakhulu amabini amaTaliyane. Imisebenzi yakhe kukuba, mhlawumbi, phakathi kwamaziko amaninzi aqhutywe kuwo jikelele. Kungakhathaliseki ukuba ubuzwe bobuphi, umculo wakhe, i-freettos yakhe, ungena emphefumlweni kwaye uyathintela kakhulu ingqondo yomntu. I-Operas ayibhalwanga ukuba imangaliswe ngobuchule babo bobuchwephesha okanye ukuba bayabambelela kangakanani kwimithetho (nangona ngokuqinisekileyo inceda ukuba i-opera inezo iimpawu).
Babhalwa ukubonisa iimvakalelo neemvakalelo zabantu. Ii-operas ze-Verdi zenza loo nto.
Ii-Operas zikaGiuseppe Verdi
UNabucodonosor , 1842
I-lombardi alla prima crociata, ngo-1843
Ernani , 1844
Ndifanele ngenxa yeFoscari, ngo-1844
Attila , 1846
Macbeth , 1847
Jérusalem , 1847
La battaglia di Legnano , 1849
ULuisa Miller , ngo-1849
Rigoletto , 1851
I-trotore , 1853
La traviata , 1853
Simon Boccanegra , 1857
Unoblo kwi-maschera , ngo-1859
I-forza del destino, ngo-1862
UDon Carlos , ngo-1867
IiNqaku eziKhuseleko zeVerdi
UGiuseppe Verdi wayekho Oktobha 9 okanye ngo-10, 1813 eLe Roncole, e-Italy waza wafa NgoJanuwari 27, 1901 (iMilan, eItali).
Izitayela zomculo zikaVeldi zihluke kakhulu, abaqambi abaninzi - abadlulileyo nabangoku-abayi kubazisebenzisa. Kufana nokuba unayo i-copyright kubo.
Ukuba udumo lukaVerdi kunye nempumelelo lwaye lwaguqulelwa kwimigqaliselo yanamhlanje, uya kuba yinkwenkwezi yerwala. Ngaphandle kokuba ngumntu ohamba phambili womculo, wayengumntu wezopolitiko obonakaliswa ngamakhulu amabini amaTaliyane.
Uninzi lomculo kaVerdi usetyenziswa ngaphandle kwendlu ye-opera kwihlabathi lonke; "I-Matshi yoThupheko" esuka kuAida isetyenziswe kwimikhosi emininzi iquka ukuhlaziywa kwezikolo eziphakamileyo.
Iintsapho zeVerdi kunye nabantwana
Uzalwe njengoGiuseppe Fortunino uFrancesco Verdi kuCarlo Verdi noLugiia Uttini, kukho iindlebe kunye neendaba ezixakisayo ezijikeleze intsapho kaVerdi kunye nobuntwana.
Nangona iVerdi ithe abazali bakhe babehlwempuzekileyo, abahlali abangafundanga, uyise wayengumnini-umnini-mhlaba, kwaye unina wayengumnxeba. Ngoxa wayesengumntwana omncinane, uVerdi kunye nosapho lwakhe bathuthela eBusseto. U-Verdi wayedla ngokutyelela ilayibrari yasekuhlaleni yesikolo sama-Jesuit, ekuphuculeni imfundo yakhe. Xa wayeneminyaka eyisixhenxe ubudala, uyise wamnika isipho esincinane - i-spinet. UVerdi wayebonise uthando kunye nokuthabatha umculo owenzela ngomusa uyise. Kwiminyaka emininzi kamva, i-spinet yalungiswa ngokukhululeka ngumenzi we-harpsichord wasekhaya ngenxa ye-Verdi.
Iminyaka Yomntwana We-Verdi kunye noLutsha lwaBantu abadala
Ngenxa yokugquma kumculo, uVerdi waziswa kuFerdinando Provesi, umama we-Philharmonic yasekhaya. Kwiminyaka emininzi, uVerdi wafunda kunye neProvesi kwaye wanikwa isikhundla somqhubi womqhubi. Xa uVerdi ejika iminyaka engama-20, efunde isiseko esizinzileyo ekubunjweni nasekusebenziseni ubugcisa, wahamba waya eMilan ukuya emdumeni womculo owaziwayo. Emva kokufika, wabuyela ngokukhawuleza-wayeneminyaka emibini emdala kunomyinge weminyaka. Sekunjalo ukuzimisela ukufunda umculo, uVerdi wathatha izinto ezandleni zakhe waza wafumana uVincenzo Lavigna, owayesakuba ngu-harpsichordist weLa Scala.
I-Verdi yafunda i-counterpoint neLavigna iminyaka emithathu. Ngaphandle kwezifundo zakhe, waya kwiindawo ezininzi zokuzonwabisa ukuze athathe ubugcisa obuninzi ngangokunokwenzeka. Oku kuza kuba ngumsebenzi wee-opas zakhe.
Ubomi boLuntu bokuQala
Emva kokuchitha iminyaka emininzi eMilan, uVerdi wabuya ekhaya waya eBusseto waza waba ngumculo weedolophu yedolophu. Umxhamli wakhe, u-Antonio Barezzi, owayexhasa uhambo lwakhe oluya eMilan, wahlela usebenziso luka-Verdi lokuqala loluntu. UBarezzi naye uqeshe uVerdi ukufundisa umculo kwintombi yakhe, uMargherita Barezzi. U-Verdi noMargherita babethandana ngokukhawuleza batshata ngo-1836. I-Verdi yagqiba i-opera yakhe yokuqala, u- Oberto , ngo-1837. Kwafika impumelelo emnene kwaye uVerdi waqala ukuqamba i-opera yakhe yesibili, Un giorno di regno . Esi sibini sinabantwana ababini ngo-1837 kunye no-1838 ngokulandelana, kodwa ngokudabukisayo bobabini abahlala ebudeni babo bokuqala bokuzalwa.
Inkathazo yabetha kwakhona xa umfazi wakhe efa ngaphantsi konyaka emva kokufa komntwana wakhe wesibili. I-Verdi yachithwa ngokupheleleyo, kwaye kulindeleke ngoko, i-opera yesibili yayiyihluleka ngokupheleleyo kwaye yenze kanye kuphela.
Ubomi boLuntu obuPhakathi
Emva kokufa kwentsapho yakhe, uVerdi wangena kwixinzelelo kwaye wafungela ukuba akayi kuphinda amise umculo kwakhona. Nangona kunjalo, umhlobo wakhe wamkhuthaza ukuba abhale enye i-opera. I-opera yesithathu ye-opera, uNabucco , yayiyimpumelelo enkulu. Kwiminyaka elishumi ezayo, uVerdi wabhala ii-operas ezilishumi elinesine-nganye iphumelele njengaleyo phambi kwayo-eyayimisa ekubeni yenzeke. Ngo-1851, uVerdi waqalisa ubudlelwane kunye neenkwenkwezi zakhe ze-sopranos, uGiuseppina Strepponi, kwaye wahamba kunye phambi komtshato. Ngaphandle kokujongana noxinzelelo lwaloo "nto," uVerdi wayexhomekeke kwiAustria njengoko behlala eItali. Naphezu kokuyeka ukuyeka i-opera ngenxa yeencensors, uVerdi wabhala enye ingcweti, uRigoletto ngo-1853. Ii-opharetha ezilandelelanayo zazingalingani ngokufanayo: Il Trovatore kunye neLa Laviviata .
Ubomi boLuntu obuLunga obusemva kweVerdi
Ininzi yemisebenzi kaVerdi yayidunyiswa luluntu. Abanye abantu baseTaliyane bayamemeza esithi "Viva Verdi" ekupheleni kwayo yonke imisebenzi. Imisebenzi yakhe yayimele "intsholongwane yase-Austrian" eyaziwa ngokuba yi-Risorgimento kwaye yahlaziywa kulo lonke ilizwe. Ngexesha lokugqibela lobomi bakhe, ngaphandle kokuhlaziya iingoma zangaphambili, uVerdi wabhala ezinye ii-opas ezibandakanya ii- Aida , Otello , no- Falstaff (owokugqibela wabhala i-opera ngaphambi kokufa kwakhe). Kwakhona wabhala inqwaba ye-requiem eyaziwayo, equka "u- Irae ".
Emva kokuxhwaleka ngoJanuwari 21, 1901, ehotele yaseMilan, uVerdi wafa ngaphantsi kweveki kamva.
Ukubukela eYurophu - Abaqambi beClassal Famous
Ixesha loLuntu loLuntu lweeMidlalo yoLuntu
Inani lezixokelelo ezivunywe nguMongameli uBarack Obama
I-Marine kunye nabaNtsundu aba-Eyed Kids
Yiyiphi iBelt Timing kwaye Kufuneka ibuyiselwe nini?
IBeith College Admissions
Njani I-Smart Were Dinosaurs?
Indlela yokubhala Ingxoxo kwiingxelo